डा.महाविर पुनले बनाएको ‘पिपिई’ मेडिकल काउन्सीलद्धारा स्वीकृत, छिट्टै ७ सय सेट तयार हुने
१३ चैत, काठमाण्डौं । राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका प्रमुख डा. महाविर पुनले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस संक्रमणका विरामी जाँच गर्दा लगाउने पिपिई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट) ड्रेसलाई मेडिकल काउन्सीलले स्वीकृति दिएको छ ।
नेपालमा अतिनै आवस्यक रहेको र टिचिङ अस्पताल काठमाण्डौं र बि.पी अस्पताल धरानबाट पनि त्यस्तो ड्रेसको माग रहेको र त्यो बनाउनका लागि राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रलाई जिम्मा आएको डा पुनले यसअघि सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए ।
सोहि अनुरुप आविस्कार केन्द्रले तयार पारेको उक्त ड्रेसलाई मेडिकल काउन्सीलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले इमरजेन्सीका बेला काम चल्ने जानकारी दिएको डा. पुनले संसारन्युजलाई बताएका छन् ।
‘आज विहान २ वटा बनाएर डा. भगवान कोइरालाजीलाई देखाएको थिए, उहाँले इमरजेन्सीका बेला काम चल्छ भन्नु भएको छ । दुई वटा गार्मेन्टलाई ७–७ सय मिटर सामग्री दिएको छु छिट्टै बन्छ ।’
डा. पुनले उक्त सामग्रीबाट ५ सय सेट बनाउन सकिने जानकारी दिँदै विदेशबाट सामग्री आयात नभइरहेको अवस्थामा बजारमा ‘रवराइज टपेटा’ नामक उक्त सामग्री खोजीरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण नेपालमा पनि तीनजनामा पृष्टी भइसकेको छ । त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न तयारी गरिरहेको अवस्थामा चिकित्सक र प्राविधिकले लगाउने उक्त ड्रेस अभाव भइरहेको समाचार आइरहेको थियो । डा.पुनको आविस्कार केन्द्रले उक्त ड्रेस बनाउने जिम्मा लिएको भन्दै डा. पुनले मंगलबार ड्रेस सिलाउने टेलरको आवस्यकता रहेको समेत बताएका थिए ।
१८ चैत्र, काठमाडौँ । वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी भरतपुर…
स्पेनका नेपालीबारे राष्ट्रपति भण्डारीको गम्भीर चासो, नेपाली दूतावास म्याड्रिडको यस्तो अनुरोध